Dadka: Casho ka badan ka qumman: qiimaha soo dhawaynta uu soo diyaariyey Macron inta lagu gudajiray G7 ee Biarritz wuxuu ku wareegaa shabakada - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Dadka: Casho ka badan ka qumman: qiimaha soo dhawaynta uu soo abaabulay Macron inta lagu gudajiray G7 ee Biarritz wuxuu ku wareegayaa shabakadda
Dadka: Casho ka badan ka qumman: qiimaha soo dhawaynta uu soo abaabulay Macron inta lagu gudajiray G7 ee Biarritz wuxuu ku wareegayaa shabakadda
Dhamaadkii bishii Agoosto, lammaanaha Macron waxay heleen hoggaamiyeyaasha toddobada waddan ee ugu awoodda badan munaasabadda furitaanka shirka G7 ee Biarritz.
Икация от Brigitte iyo Emmanuel Macron (@lesmacron) 3 SEN 2019 ee 9: 38 PDT
Bishii Agoosto 24, casho cajiib ah ayaa loo habeeyay madaxweynaha Golaha Yurub Donald Tusk, Raiisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson, Angela Merkel, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, Madaxweynaha Giuseppe Conte, Canadian Justin Trudeau iyo Raiisel wasaaraha Japan Shinzō Abe.
Икация от Brigitte iyo Emmanuel Macron (@lesmacron) 30 AUG 2019 ee 7: 29 PDT
Le Parisien kor u qaaday indhashareerka shirkan oo qarash ahaan ku baxay Dawladda Faransiiska. Sida warbixinnada maalinlaha ah, cashada, oo markii hore lagu qorsheeyay makhaayad ku taal badda gudeheeda, ayaa la abaabulay daqiiqada ugu dambeysa waxaana lagu qabtay hoolka iftiinka ee Biarritz.
Икация от Brigitte iyo Emmanuel Macron (@lesmacron) 22 AUG 2019 ee 8: 20 PDT
Looma baahna in la yiraahdo, liistada waxaa diyaariyey dhowr iyo toban shey oo go'aansaday inay u adeegaan tukeel casri ah, marmitako of buluug tuna, xulashada Cheeses dalka iyo keega Basque.
Икация от Brigitte iyo Emmanuel Macron (@lesmacron) 24 YuL 2019 ee 10: 12 PDT
Casho cajiib ah intee leeg ma ku kacday lammaanaha madaxweynaha? Sida laga soo xigtay Le Parisien, oo la xiriiray qabanqaabiyeyaasha, qiimaha dhacdadani kama aysan dhaafin 200 000 euro. Miisaaniyadda ayaa lagu ixtiraamay qiimaha dhalooyinka aan ka badnayn lacagta loo yaqaan '25 euro'.
Икация от Brigitte iyo Emmanuel Macron (@lesmacron) 16 YuL 2019 ee 9: 55 PDT
Fikraddaada, wadartaani ma tahay mid la aqbali karo dhacdadan oo kale? Fikradaada kula wadaag faallooyinka.
Sababta ay u kala jabeen Amiir Andrew oo ay soo diyaariyeen Sarah Ferguson ayaa waxaa lagu cadeeyay: "Waxaan gaadhay dhamaadka xadhiggayga".